Xiaomi သည်ဖုန်းကို၎င်းကိုဝိုင်းရံထားသည့်မျက်နှာပြင်ပါသည့်တီထွင်မှုတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည် Androidsis
Xiaomi မျက်နှာပြင် Xiaomi Mi Mix Alpha2ဖုံးလွှမ်းထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါတို့မင်းကိုပြောပြခဲ့တယ် Xiaomi မှရေတံခွန်မျက်နှာပြင်ဖုန်း။ တစ် ဦး ရိုးရှင်းစွာအံ့မခန်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ကစက်။ ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူကအလုံအလောက်မရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှထက်ပို Xiaomi က သင့်အားအံ့အားသင့်စေမည့်စက်မှုဒီဇိုင်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်အသစ်ကိုပဲ The Hague တွင်မှတ်ပုံတင်လိုက်သည်။
မင်းမှတ်မိလားဌ Xiaomi Mi ရောနှောအာလဖ? ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသည့်ဒေါင်လိုက်အနည်းငယ် မှလွဲ၍ ကျန်ဖုန်းကိုပတ်ပတ်လည်ပုံဖော်ထားသည့်မျက်နှာပြင်ပါသည့်အနာဂတ်အနာဂတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီယခုကုမ္ပဏီအဖြေတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်သည် ရလဒ်? မင်းကိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မယ်
ဤလိုင်းများကို ဦး ဆောင်နေသောပုံတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Xiaomi သည်ဒီ terminal ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံသဏ္givingာန်တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Mi Mix Alpha ကဲ့သို့ပင်မျက်နှာပြင်သည်ဖုန်းကိုလုံး ၀ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဤကိစ္စတွင်ကင်မရာထားရန်ဒေါင်လိုက်ချောင်းမရှိချေ။
ထို့အပြင်ပေကျင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် Mi Mix Alpha ၏ဗေဒနှင့်လုံးဝကွဲလွဲနေသောအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည် - အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်ပိုင်းတွင်ဝှက်ထားသောပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာ။ Xiaomi သည်နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းများကိုနိုင်ငံတကာအကာအကွယ်ပေးရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ပေးပို့ခဲ့သည့်ပုံကြမ်းများအရကင်မရာတွင်အဆင့်မြင့်သောဒုတိယပုံစံရှိလိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ကယင်ကောင်အပေါ်ခေါင်းလောင်းမပစ်ရ။ ထုတ်လုပ်သူက Xiaomi Mi 11 ကိုမနေ့ကတင်ပြခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုဘယ်သောအခါမျှမမြင်နိုင်သောမူပိုင်ခွင့်မတိုင်မီရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထာဝရစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၊ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းများကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်မှာမှန်သည်။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာအာရှထုတ်လုပ်သူကပထမဆုံးဖုန်းမျက်နှာပြင်ဖုန်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ သူ၏အသွင်အပြင်သည်အံ့သြစရာပါတကား!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi မျက်နှာပြင် Xiaomi Mi Mix Alpha2ဖုံးလွှမ်းထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Asus ROG Phone5သည်နောက်တံဆိပ်၏ဂိမ်းကစားခြင်းမိုဘိုင်းဖြစ်သည်။ Snapdragon 888 နှင့် 16 GB RAM တို့ပါရှိသည်။